Ukukhethwa kwamanoveli abaseshi abahamba phambili
Ukubuyekezwa kwamanoveli wabaseshi
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaFranck Thilliez
UFranck Thilliez ungomunye wabalobi abasha abaphethe ukuvuselela uhlobo oluthile. INeopolar, isizinda esingaphansi samanoveli obugebengu baseFrance, wazalwa emuva eminyakeni yama-70. Kimina iyilebuli elibi, njengabanye abaningi. Kepha abantu banjalo, ukuzilinganisa nokuzihlukanisa ...
Izigqila Zesifiso, nguDonna Leon
Umbhali waseMelika uDonna Leon ukweleta udumo lwakhe lokulandisa ngokumthakazelisa kwakhe ngeVenice. Eminyakeni engamashumi amabili nambili ngemuva kokuqala ukudonsa umucu wecebo lakhe lokuqala nguKhomishani Brunetti edolobhaneni lemisele, intambo ekhonjisiwe yenze iVenice yaba yindawo enkulu yamacala. Ukuhlalisana ndawonye ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJohn Verdon
Kungashiwo ukuthi uJohn Verdon akayena umlobi onekhono, noma okungenani akakwazanga ukuzinikela ekubhaleni ngobuningi babanye ababhali asebevele bathole ubizo lwabo besebancane. Kepha okuhle ngalo msebenzi ukuthi awuqondiswa imihlahlandlela yeminyaka, futhi ...
Amacala aseSaint-Malo, kaJean-Luc Bannalec
Konke kubukeka kufundwa ngokufanele nguJörg Bong. Kusuka kumbumbumbumbumbumbumbaba okuzosetshenziswa, uJean-Luc Bannalec, kuya kumuntu onguKhomishani Dupin odlula lowo mbhalo futhi eba yinto ephindaphindayo ehlasela umcabango wasehlobo nge-cadence ekhangayo. Ngoba kusuka eFrance Brittany ehlaselwe yilo lonke ugu lwayo ...
Izingane ezinhle, zikaRosa Ribas
Yilokho ngisho nemindeni engcono kakhulu ekhuluma ngayo. Ukubukeka umthetho. Futhi yingakho-ke lapho kulapho ukuhlukaniswa nokuhlukaniswa nalokho okufanele kube uphawu, ngoba esikhathini esedlule yonke into yayihluke kakhulu. Kwakukhona isikhathi lapho umndeni wawufana nokwethembana, ngobuqotho. Konke kwandiza ...
Amavesi endoda efile, kaLincoln nengane
Ithimba labaphuphi bezincwadi zabamnyama, okungavumelekile okunguDouglas Preston noLincoln Child, babuya ngesitolimende sekhulu lesithathu sika-Inspector Pendergast ozohamba onqenqemeni lokuwa ngemuva kwamacala amaningi ku-tightrope. Kepha yilokho ama-ejenti akhethekile anakho, abekho ngaphandle kokungezwani, ...
UQuirke eSan Sebastián, nguBenjamin Black
Ngenkathi uBenjamin Black etshela uJohn Banville ukuthi isitolimende esilandelayo sikaQuirke sizokwenzeka kwifilimu esevele idumile iDonosti, wayengacabangi ukuthi lolu daba luzophumelela kangakanani. Ngoba akukho okungcono kunesimo sokuthuthukiswa kwesakhiwo esigcwele ukungafani okufana neSan Sebastián uqobo, ngakho ...
White King, kaJuan Gómez Jurado
Izindaba ezimnandi zokungabaza ziba zinhle kakhulu lapho isiphetho sazo sikwazi ukuhlanganisa ukuvalwa kwawo wonke amabhizinisi asontekile nengaqediwe, kepha ngesimemo esifanayo sokuqagela. Ungakhipha isigwebo ngasikhathi sinye lapho ungakhomba kokungahle kube noma yini ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi9 Okulandelayo →